Android လုလင်: May 2013
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Android Application လေးကတော့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့အထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်
လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Computer မှာ RAR တွေ အသုံးဝင်သလိုဘဲ Android မှာလည်း Rar ကိုရှိထားသင့်ပါ
တယ်။ ဖုန်းနဲ့ Application , Game တွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာ Application တွေကို Rar နဲ့ ချုံ့ထား
ရင်အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ UnRar ကိုသုံးပြီး ဖြည်ချလိုက်ရုံပါဘဲ။ အရင်ကလို ကွန်ပြူတာထဲထည့် Rar ဖြည်
ပြီးမှ ဖုန်းထဲပြန်ထည့် နဲ့ အလုပ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေGoogle Play Store ကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီး Application များကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ နိူင်ပါပြီ။ သို့ သော် ဒီလို ၀င်ရောက်တဲ့ အခါမှာ Android ဖုန်းတိုင်း ၀င် ရောက်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သလားဆိုတာမေးစရာရှိလာပါတယ်။ ဒါကလည်း User တွေအနေ နဲ့ မေး သင့် တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ အကယ်၍ မိမိရဲ့Device က Play Store ကိုဝင် ရောက် လို့ မ ရဘူး ဆို ရင် တော့ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့Google Play Support Device ဆိုတဲ့ လင့် မှာဝင်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ ၀င်ကြည့် လို့ မှ မိမိ device ဟာ List ထဲမှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင် တော့Play Store ကို တရားဝင် Access မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီList ထဲမှာပါပြီး ၀င်လို့ မရဘူးဆိုရင်တော့ အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ရမှာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ Samsung Galaxy Gio ပဲထားပါတော့ ။ Gio ထွက်ခဲ့ တဲ့ အချိန်တုန်း Play Store ဆိုပြီးတောင် နာမည်မပြောင်းသေးပါဘူး။ Market အနေနဲ့ ပဲApp ပါဝင်လာတာပါ။ ပြီးတော့ ဖုန်းရဲ့ Firmware ကလည်း 2.2 (Froyo) နဲ့ လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် 2.3.6 (Gingerbread) အထိUpdate ထွက်ထားပါတယ်။ Gio က play store ရဲ့ Support Device List ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Market App ပေါ်က တောင် Access လုပ်ပြီး ၀င်ရောက် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ နိုင်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ Google ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုဘယ် Device မဆို play store ကိုဝင်လို့ ရပါတယ်။ ၀င်လို့ မရဘူးလို့ ပြောနေသူတွေလည်းရှိ ပါတယ်။ ဒီလို ၀င်လို့ မရတဲ့ သူ တွေ အတွက်ကတော့Google Play Service ဆိုတဲ့ App ကို အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့် အတိုင်း ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ပြီး Install လုပ်ပါ။ ပြီးသွားရင် Setting>>About phone>>Software update ကို ၀င်Google အကောင့် နဲ့ Sign up လုပ် ပြီး FOTA update ကို ရယူပါ။ ဒီလို FOTA update ယူမှ GIO လို ဖုန်းမျိုးဆို ရင် နဂိုပါဝင်လာတဲ့Google ရဲ့ Native app တွေကို update လုပ်ပေးမှာပါ။FOTA update လုပ်ရင် ဘာမှ ပြဿနာ မရှိနိုင် ပါဘူး။ Samsung ၊ HTC စတဲ့branded ဖုန်းတွေအကုန်လုံး Google Native app တွေ Version နိမ့် နေရင် Update လုပ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအကုန်လုပ်ပြီးရင်တော့Play Store Access ရရှိပါပြီ။
သျှမ်းထက် (DL Tech Club)
Click Here to Download Play Store Service
Google Play Support Device Link --
android ဖုန်းတွေမှာ PDF file တွေကိုဖတ်ဖို့အတွက် PDF Reader Pro ပါ။ သူက Pro ဆိုတော့ function ပိုစုံပါတယ်။အကြိုက်ဆုံးကတော့ စာမျက်နှာတွေကို play လုပ်လို့ရတာပါဘဲ။ Play ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် စာမျက်နှာတွေက တဖြည်းဖြည်း အပေါ်ကို အော်တိုတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်မျက်နှာဖတ်ပြီးတိုင်း စာရွက်ကို လူက လှန်ဖတ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ဖုန်းနဲ့ PDF file စာအုပ်တွေ ဖတ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
PIN-Patten-Passwords unlock လုပ်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း
မည်သည့် Android ဖုန်းမဆို Pattern Lock , Passwords Lock , Pin Lock များကို ဖျက်ထုတ်ပေးနိုင်မယ့် Application လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ပေးထားတဲ့ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး ရလာတဲ့ ZIP ဖိုင်ကို SD Card ထဲသို့ ထည့်ကာ CWM (Recovery Mode ) သို့ဝင်ပြီး Install လုပ်ပေးလိုက်ရုံဖြင့် အဆင်ပြေ သွားမှာ
ဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ... တကယ့်ကို ၀မ်းမြောက်စရာလေးပါဘဲ.. Pattern Lock , Passwords Lock , Pin Lock ကျနေသူများအတွက်ကတော့ လုံးဝ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM9comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဒီဂိမ်းမှာ Timed, Endless, Wanted, Memory Modeဆိုပြီး
Game mode4မျိုးပါရှိပါတယ်
=== Android version 2.0 အထက်မှာကစားနိုင်ပါတယ် ===
ZomBinLadin 11.3MB >>
အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ app တစ်ခုပါ။ လန်းပါတယ်။
ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ မှတ်ထားတဲ့ Contacts တွေများလို့ ..
ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့သူကို အလွယ်တကူ ရှာမရတဲ့အခါ ..
အသုံးဝင်ပါတယ်။ Gesture ဆိုတာ screen ပေါ်မှာ ..
အမှတ်သား တစ်ခုခု ဆွဲလိုက်ရင် ရှာဖွေပေးမယ့် function ပါ။
အရင်ဆုံး Gesture Call app ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Add ..
ကို နှိပ်ပါ။ Contacts ပေါ်လာပါတယ်။ မှတ်ချင်တဲ့ နာမည်ကို
ရွေးပါ။ ပြီးရင် စိတ်ကြိုက် အမှတ်သားတစ်ခု ဆွဲလိုက်ပါ။
Create ကို နှိပ်လိုက်ရင် ထိုအမှတ်သားကို ပြန်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ ..
မှတ်ထားတဲ့ သူဆီ ဖုန်းခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆို Contacts ..
ကိုဖွင့်ပြီး နာမည် လိုက်ရှာနေစရာမလိုတော့ဘူး။
Gesture Call ကိုဖွင့်ပြီး အမှတ်သားကို ဆွဲလိုက်တာနဲ့ ..
ဖုန်းခေါ်ပေးသွားပါမယ်။ Call အပြင် SMS ကိုပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မိုက်တယ်မလား။ ကြိုက်ရင် ယူဗျာ :)
Android 2.2 နှင့်အထက် ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကို သဘောကျတာနဲ့ ကလိကြည့်မိတော့ ..
ရေလည်လန်းပါလားဆိုပြီး သဘောကျတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ screen ပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေတဲ့ ..
အမှုန်လေးတွေ ၊ အချောင်းလေးတွေကို ဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လက်ရဲ့ ခိုင်းစေမှုအတိုင်း ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အတော်လေး ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ပျော်စရာလဲ ကောင်းတယ်ဗျ။
နောက်တစ်ခုက သီချင်းဖွင့်တဲ့အခါ သီချင်းရဲ့ သံစဉ်နဲ့အတူ ..
ထို အမှုန်အမွှားလေးတွေက စည်းချက်လိုက်ပြီး လှုပ်ရှားပေးပါမယ်။
အပျင်းပြေ ထိုင်ကလိချင်စရာ app လေးတစ်ခုပါ။
App setting ထဲမှာလဲ ကလိစရာ အများကြီး ပါဝင်ပါသေးတယ်။
အလန်းလေးမို့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး။ ကြိုက်ရင် .. Like
နာမည်ကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ app design ကိုတော့ ..
window 8 ပုံစံလို ဖန်တီးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထူးခြားမှုကတော့ ..
သီချင်းသံကို မူလထက် ပိုကျယ်သွားအောင် လုပ်ပေးတာပါပဲ။
သူ့မှာပါတဲ့ Equalizer function က တော်တော်လန်းပါတယ်။
ဖုန်းစပီကာ အသံတိုးလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အကြိုက်ပါ။
Equalizer ကို enabled လုပ်ပြီးရင် အောက်က ဘားတွေမှာ ..
အတိုးအချဲ့ ဆွဲလိုက်တာနဲ့ မူလ စပီကာအသံဟာ သိသိသာသာ ..
ကျယ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ function ကတော့ စွဲမက်စရာပါပဲ။
ဖုန်းစပီကာ အသံတိုးနေလို့ စိတ်ညစ်နေရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
မူလထက် သိသိသာသာ ပိုကျယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Android 2.2 နှင့်အထက် ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ရေလည်လန်းပါတယ်။ မြန်မာ online radio တစ်ခုပါ။
internet ချိတ်ဆက်ပြီး နားထောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေ နားထောင်နိုင်လဲဆိုတော့ ...
BBC News (morning)
BBC News (evening)
NHK World Radio တို့ဖြစ်ပါတယ်။
VOA , BBC , RFA လိုင်းတွေ ပါနေတာ သဘောကျစရာပါပဲ။
နောက်ဆိုရင် ရေဒီယိုကြီးနဲ့ လိုင်းရှာနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
internet ချိတ်ပြီး အလွယ်တကူ နားဆင်လို့ရပါပြီ။ အဆင်ပြေပဲဗျ။
ဒီ app ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ JS Media ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ app လေးကတော့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ app တစ်ခုပါ။
အရင်တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ virtual mouth app တွေ စမ်းခဲ့ဖူးလား။
အခု ဒီကောင်လေးကတော့ internet ချိတ်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။
ဒီအတိုင်းပဲ ပါးစပ်ပေါ်ဖုန်းကို ကာလိုက်တာနဲ့ ရယ်နေရပါပြီ။
သူ့အလိုလို ပါးစပ်မျိုးစုံက စကားပြောပြနေပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ..
ကလေးတွေ အရမ်းသဘောကျတဲ့ app လေးတစ်ခုပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ..
ဖုန်းကိုလဲ လေးလံမသွားစေပါဘူး။ ပါးစပ်ပုံစံအတိုင်း မျက်နှာအမူယာတော့ ..
ပြီပြင်ပါစေနော် .. ကလိကြည့်ဗျာ .. ရယ်ရတယ်။ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။
download - (6MB)
ဒီ app ကို ကျွန်တော်အရင်က တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ function သိပ်မပြည့်စုံခဲ့ပါဘူး။ အခု update version မှာတော့ function အပြည့်ပါလာလို့ သဘောကျတာနဲ့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
member အသစ်တွေ အတွက်ပါ။
Shake Call နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ ဖုန်းလာတဲ့အခါ ..
ဖုန်းကို ခါလိုက်တာနဲ့ ဖုန်းကိုင်ပီးသားဖြစ်သွားမယ်။
ဖုန်းချတဲ့အခါမှာလဲ ခါလိုက်တာနဲ့ ပြန်ကျသွားပါမယ်။ လန်းတယ်။
ဆိုင်ကယ်စီးရင်း ၊ ကားမောင်းရင်း ဖုန်းလာတဲ့အခါ ဖုန်းကို ခါပြီး ..
ဖုန်းကိုင်တာ ချတာ လုပ်လို့ရသွားပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့။
shake လုပ်အားကိုလဲ ချိန်ညှိလို့ရတယ်။ အသုံးဝင်တာလေးမို့ ..
ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သဘောကျရင် .. Like :)
Note - Shaking Intensity ကို 350 လောက် ချိန်ထားတာ ..
ဒါကတော့ ဖုန်းပြောချိန်ကို Timer ပေးလို့ရတဲ့ app ပါ။
အထူးသဖြင့် ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် .. ဟဲဟဲ။
ဒီနေ့တော့ ဘယ်နှနာရီပဲ ပြောမယ်ဆိုပြီး timer ပေးလို့ရတာပေါ့။
နောက်ပြီး timer အချိန်ပြည့်ခါနီးရင် သတိပေးတဲ့ function လဲပါတယ်။
အချိန်ပြည့်တာနဲ့ ဖုန်းကျ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။
လိုချင်ရင် ယူလိုက်ကြပေဦး။ 2.2 နှင့်အထက် ဖုန်းများတွင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့ အားလုံး သိတဲ့ ဖုန်း unlock ပြုလုပ်နည်း(2) မျိုးရှိပါတယ်။ Handset & SIM Card Unlock တို့ ဖြစ်ကျပါတယ်..။ Handset Unlock ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာမိမိ Handset ၏ Unlock Key ကို မေ့သွားသောအခါ Software ဖြင့် ပြန်လည် ပြုလုပ် ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်...။
အခုက ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း ကိုဖိုးသား ၏ Handset သည်Samsung Galaxy y S3560 Android OS သုံးထားသော ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ် ..အဲဒီ ဖုန်း Sim Card Lock ကျသွားလို့ကျွန်တော် ဒီပို့ စ်လေ ကို တင်ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...။ ဒီလို့ ဗျ Sim Card Lock ကျရင် Emergency Code တောင်းပါတယ်.. ထိုအခါ မသိပဲ ရမ်းပြီး ဖြေဆိုလျှင် (5) ခါသာ ဖြေဆိုခွင့် ရှိပါသည်..။ အဲလို့ မှမရတော့ ရင် ဖုန်းရုံးကိုသာ ပြေး လိုက်ပါ မြန်မာ့ကျပ်ငွေ၂၀၀၀၀ လောက် ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်..။
တစ်ချို့ ကလဲ ကျွန်တော် အခု ပြောပြမည့် နည်းလမ်းကို လက်မခံကျပါဖူး (မယုံ)ဖူးပဲ ပြောပါတော့ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဖုန်းရုံးကို သွားရမည့် ကိစ္စ ကို ကိုယ့်ဟာကို လုပ် လို့ ရတယ်ဆိုတော
သူ တို့လက်မခံနိုင်တာပါ...။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ကိုယ်တွေ့ လေး မို့ လို့ ပါ အဆင်ပြေပါတယ်
ဘာပဲ ပြောပြော ကိုယ့်မှာ လဲ အဲလို့ကိစ္စ မျိုးကြုံရင်တော့စမ်းသပ်လို့ ရအောင်ရယ်
( ငွေ၂၀၀၀၀ သက်သာလို့ သက်သာညာပေ့ါ ) နောက်ပြီး အတွေ့ အကြုံတိုးတာ ပေါ့ ဗျာ...
(မရတော့ လဲ ဘာဖြစ်လဲ Phone ရုံးကို သာ G0! တော့ ပေါ့ဗျာ...ဟီဟီး ) ကျွန်တော် တော့ 
ကံကောင်းလို့ ပဲလား မသိဖူး အဆင်ပြေသွားတယ် ဗျ... ကဲ ကြာတယ်ဗျာ ဘယ်လို့ လုပ်ရသလဲ ဆိုတာကို
အောက်မှာ ကျွန်တော် တစ်ဆင့်စီ ရှင်းပြပေးပါမယ် တကယ်တော့ လွယ်လွယ်လေးပါဗျ...... ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဒီလိုလူ့ငနွားတွေလည်းရှိတယ်နော်(android လုလင် ဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးဖတ်ပေးပါ)
android လုလင် ဘလော့ကို ကျနော် ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ပိုစ့်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့မိသမျှ android နဲ့ဆိုင်တဲ့ပိုစ့်တွေကိုစုစည်းတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို ဒီဘလော့ကို ဖတ်ရှုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးလည်း သိကြမှာပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဒီလိုလူ့ငနွားမျိုးလည်း ရှိတာပနော်
ကျနော် တင်လိုက်တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုမှာ မိတ်ဆွေ ၀င်ဖတ်တယ်
တချို့ဆော့ဝဲတွေက fake ပါ
ရတာ ရှိသလို မရတာလည်း ရှိမှာပေါ့ဗျာ
တကယ်မရတာမျိုး အဲလိုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ မိတ်ဆွေဆဲဖူးသလား
မြန်မာပီပီ ယဉ်ကျေးမှု ရှိတဲ့သူဆို ဘယ်ဆဲမလဲဗျ
မြန်မာဖြစ်ပေမယ့် ခွေးအလာ စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆဲထားတာလေ
ဒီဘလော့ကိုဖတ်နေတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်
ကျနော် ဒီစာကို မရေးချင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်တဲ့ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်မနိုင်လို့ ခုရေးပါတယ်။
android လုလင် ကို ချစ်ခင် အားပေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများရဲ့
စိတ်ရင်းနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးပေးတာလေးကို မျှော်နေမယ်ဗျာ
ရေးတဲ့အချိန် 10:10 PM5comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
android ဖုန်းတွေအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းဆော့ဝဲတွေမှာ ကီးတောင်းတာတို. လိုင်စင်တောင်းတာတို. ကို ဖျက်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲ
android ဖုန်းတွေအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းဆော့ဝဲတွေမှာ ကီးတောင်းတာတို. လိုင်စင်တောင်းတာတို. ကို ဖျက်ပေးပီး full version ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။တနည်းပြောရရင်တော့ လူလည်ကြတာပေါ့နော် ဟီးးးးးး ပိုက်ဆံပေးမှ ကီးရမဲ့ ဟာကို ကျွန်တော်တို.က ပိုက်ဆံပေးပီး ၀ယ်ရမဲ့ ကီးထည့်တဲ့ ကုဒ်ကို ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ. ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ
မြန်မာမှု ပြုထားးတဲ့VIBER လေးးပါ
ဘာသာပြန်ညံ့ခဲ့ရင်တောင်းးပန်ပါတယ် အ ပျော်သဘော လုပ်ထားးတာပါ :)
>>>>download <<<< or >>>> download <<<<
Credit - ko myo
လုလင်ပျို လုပ်ဖို့ အချိန်မရသေးလို့ ကိုမျိုးလုပ်ထားတာလေး အရင်တင်ပေးလိုက်တယ်နော် (တားမှမတတ်သေးတာယို့
လုလင်ပျိုလုပ်ရင် update ဖြစ်တာလေးလုပ်ပေးမယ်နော်။
Pc Internet ကို Usb သုံးပြီး ဖုန်း မှာလည်း သုံးကြမယ်
PC မှာရှိတဲ့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို android ဖုန်းတွေမှာ မျှစေသုံးနိုင်စေဖို့ဒီပို့ လေးကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
သင့်ဖုန်းဟာ Root လုပ်ပြီးဖြစ်နေရပါမယ်။
Settings > Applications > Development > USB Debugging > Turn On ဖြစ်နေရပါမယ်။
သက်ဆိုင်ရာ driver တွေတင်ပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်(ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ detect သိနေရပါမယ်)/
USB ကြိုး အဆင်သင့်ရှိနေရပါမယ်။
အရင်ဆုံး Reverse Tethering ဆိုတဲ့ ZIP ဖိုင်လေးဒေါင်းပါ။
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ပါ။
Samsaung Galaxy S2 မှာ ROOT ဖောက်နည်းလေးက တော်တော်ကို လွယ်ပါတယ် လုပ်ရတာ။
ကဲ အရှည်ကြီးမပြောတော့ဘူး။လိုအပ်တဲ့ သူတွေ လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။
ှS2 ROOT ZIP http://www.mediafire.com/?cb64e510qg9jxt5
S2 ODIN ZIP http://www.mediafire.com/?fz5egc7oad61ge6
Samsaung Kies ကို ဒေါင်းဖို့ အတွက်လင့်ခ် ကတော့ http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=172075&t=0&i=1
ဒေါင်းပြီးရင်တော့ Samsung Kies ကိုအရင် Install လုပ်ပါ။
Android ဖုန်းတွေမှာ Connected ဖြစ်ပြီးသား Wifi Password တွေ ပြန်ကြည့်နည်း
Root Browser Lite ကိုသုံးပြီးကြည့်ခြင်း
1. ပေးထားတဲ့လင့်က Root Browser Lite ကို ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ...
ရေးတဲ့အချိန် 2:13 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
reboot တွေ recovery mode တွေ power off တွေ မြန်မြန် လုပ်မယ်
လုလင်ပျိုတို့ ဖုန်းမှာ reboot တွေ recovery mode တွေ ၀င်ချင်တဲ့အခါ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးမှ power key နဲ့ home key နဲ့ စသခြင့် ၀င်နေရတယ်နော်။
ခုတော့ ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုထည့်ထားယုံနဲ့ မြန်မြန်လုပ်လို့ရပြီနော်
ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ လုလင်ပျိုတို့ ပါဝါ ပိတ်ချင်ရင်လည်း ပါဝါခလုပ်ကိုအကြာကြီးနိုပ်ပြီး power 0ff ကိုနိုပ်ရတယ်နော်
ဒီကောင်လေးမှာ power 0ff ဆိုတာလည်းပါပါတယ်။
တစ်ချက်နိုပ်တာနဲ့ ဖုန်းပါဝါ ပိတ်ပါတယ်။
တစ်ချက်နိုပ်တာနဲ့ အလုပ်လုပ်စေချင်ရင် home screen မှာ widget ယူထားလိုက်နော်
ပြေးမယ် ခုန်မယ် အသည်းစားမယ် ပစ်မယ် ဂိမ်းကောင်းလေး တစ်ခုဆော့ရအောင်
ကဲ ဂိမ်းကောင်းလေး တစ်ခုလာပြီဗျာ
လုလင်ပျို အားတိုင်းဆော့နေကျ ဂိမ်းပါ
ကြာတော့ ကြာပါပြီ ဒါပေမယ့် မြန်မာဆိုဒ်တွေမှာ သိပ်မတွေ့ရသေးတဲ့ ဂိမ်းလို့ပြောရင်မှားမယ် မထင်ဘူးနော်
Screenshots လေးတွေ ကြည့်ကြည့်ပါအုံးနော်
စွဲမက်ဖွယ် မော်ဒယ်လ် လေးများနဲ့ Go Launcher - (Sexy JB GO Launcher EX Theme v2.0
1500 တန် cdma 800 mhz ဖုန်းမှာ ringtune အသုံးပြုနိုင်မည်
၃၃၃ သို့ စာလုံးအသေး register ဟူ၍ ရိုက်နှိပ်ပြီး SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Hello Music Service Center သို့ သွားရောက်၍လည်း အောက်ပါ Member Form ကို ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။
There are two kinds of IP Addresses. A Internal and external IP address.
Internal IP address is Ip which is assigned by the router from which your phone is connected.
External IP address is the address of the device assigned by the ISP(Internet Service provider).
Finding your Phone’s IP address can be real difficult job, But its not. Below are some ways you can find yours android phone’s IP.
သင့် Android လေးက battery ခဏခဏ အားကျတတ်ရင် ဒါလေးသုံး
သယ်ချင်းတို့ရဲ့ phone က ခဏခဏ အားကျ နေတယ်ဆိုရင် ဒီကောင်လေးက ဖုန်းရဲ့
battery power စားသက်သာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဂျာ...
၂၀ နာရီ ပဲအသုံးခံရင် ဒီကောင်လေးကို သုံးရင် ၂၅ လောက်တော့ ခံနိုင်ပါတယ်...
zippyshare Download v1.8.3
ဖုန်းထဲမှာ အင်တာနက်ဝင်တဲ့အခါ flash တွေ မြင်ချင်ရင် ၊ဖလပ်ဆောင်းတွေကို လင့် နဲ့ကြည့်ချင်ရင်
အောက်ကဆော့ဝဲ 1 and2နှစ်ခုစလုံး ထည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်
Flash Song တွေလည်း ပွင့်တယ် ဘလော့ဂါတွေလည်း အဆင်ပြေတယ်
Dwonload -Android Flash Player 1
Dwonload - Android Flash Player2
မိမိ ဖုန်းထဲမှာ မှတ်ထားတဲ့ Contact List တွေကို Factory Reset မချခင် SD Card ပေါ်သို့ ပြောင်းလဲ သိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင်
ဖုန်းထဲမှာ မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုSD Card ထဲမှာ ပြောင်းပြီး မှတ်ထားလို့ရတဲ့နည်းလေး
ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖုန်းထဲမှာ
မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို SD Card ထဲ ပြောင်းမှတ်ရတာလဲဆိုရင် မိမိဖုန်းကို Setting တစ်ခုခု
မှားသွားလို့ Factory Reset ချမဲ့ အချိန်ရောက်တဲ့အခါ မိမိဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ Application တွေ၊
ဖုန်းအသစ်လဲတဲ့အခါမျိုးမှာ contact နာမည်တွေကို SIM ကတ်ထဲ ပြောင်းဖို့ 
ဖုန်းထဲက contact တွေကို မန်မိုရီ ကတ်ထဲပြောင်းလို့ရပါတယ်။
contact>>>ကနေ export/inport ကနေလုပ်ရတာပေါ့။
လုလင်ပျိုကလည်း ဖုန်းအားလုံးကိုင်ဖူးခြင်းမရှိတာမို့ တခြားဖုန်းတွေ မသိပါ။
ဒါကြောင့်မို့ အခုဆော့ဝဲကိုယူပြီးတော့ပဲ contact နာမည်တွေကို SIM ကတ်ထဲ ပြောင်းလိုက်ကြပေါ့နော်.။
ဖုန်းထဲမှာ contact နာမည်တွေကို SIM ကတ်ထဲ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
နာမည်တွေမှတ်ထားတာကို ဖုန်းကနေ ဆင်းကတ် ရွှေ့ပေးလိုက်ရင်ရတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် တချို့ဖုန်းတွေ မရတဲ့အတွက် လိုချင်သူများ ဒါလေးဒေါင်းပြီး သုံးကြည့်ပါ
Download - Phone contact move to SIM
ရေးတဲ့အချိန် 9:40 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
အလုပ်များသူများအတွက် Today to do and Tomorrow to do မှတ်စု
Download - Do it Tomorrow apk for Android
Android ဖုန်းမှာ ဆော့လိုလည်းကောင်း ရုပ်သံကြည်တဲ့ ဆိုင်ကယ် Game
Download - Racingmortor for Android